Ku iibso Bitcoin Hindiya si degdeg ah oo Amaan ah | Paxful
Si dhakhso ah Bitcoin ugu iibso Hindiya
Suuqa ugu wayn ee kala iibsiga Bitcoin ayaa hadda laga furay India. Paxful waa dookha ugu haboon haddii aad doonayso inaad BTC u badalato lacagtaada Indian Rupee (INR). Adoo helaaya nidaam lacag bixin oo dhexhdexaadin leh iyo in ka badan 300 oo qaab ood ku bixinayso lacagta, inaad Bitcoin iibsato ayaa ah mid amaan ah oo fudud hadda.
Niyad samaantaadu waa muhiimadeena koobaad, Waana taas sababta kaydkaaga Bitcoin ee bilaashka ah uu u leeyahay qaybaha badan ee amaanka iyo labo jeer hubinta amaanka si badqabka loo adkeeyo. Ayadoo la adeegsanaayo nidamayada xaqiijinta adag, iyo hanaan hufan, Paxful waa mid ah goobaha ganacsiga ee ugu amaanka badan aduunka.
Marka, maxaad sugaysaa? Arag kumanaanka yabooh oo ka dooro midka kuugu habboon si aad u iibsato Bitcoin kaaga adoo ka galaaya baroowsarka, ama ablikeeshinada iOS iyo Andorid.
Yaboohyada ugu sareeya ee Indian Rupee oo ku jirta Hindiya
La eegay 3 saac kahor IMPS Transfer — No third party
10,000.00-11,925.00 INR 10,000.00 INR $0.97 Iibso 3,157,828.79 INR Iibso Iibso
La eegay 23 daqiiqo kahor Kiishadda Oonleenka ah ee Paytm — Get btc fastest here
looma Baahna Risiid lacag bixinnada oonleenka ah
225.00-20,000.00 INR 225.00 INR $0.67 Iibso 4,605,815.43 INR Iibso Iibso
La eegay 1 saac kahor Google Pay — Third party accepted
1,000.00-30,000.00 INR 1,000.00 INR $0.67 Iibso 4,603,248.97 INR Iibso Iibso
La eegay 1 saac kahor PhonePe — NO VERIFICATION REQUIRED
La eegay 1 saac kahor Kiishadda Oonleenka ah ee Paytm — Third Party Accepted
La eegay 6 saac kahor Kiishadda Oonleenka ah ee Paytm — Third party Acepted
227.00-5,681.00 INR 227.00 INR $0.67 Iibso 4,603,248.97 INR Iibso Iibso
La eegay 6 saac kahor Google Pay — Third party Acepted
La eegay 59 daqiiqo kahor Google Pay — Third party accepted
225.00-11,650.00 INR 225.00 INR $0.67 Iibso 4,603,248.97 INR Iibso Iibso
La eegay 59 daqiiqo kahor PhonePe — Third party accepted
lacag bixinnada oonleenka ah wada hadal ma jiro
La eegay 6 saac kahor Google Pay — Third Party Accepted
250.00-18,000.00 INR 250.00 INR $0.67 Iibso 4,603,248.97 INR Iibso Iibso
La eegay 23 daqiiqo kahor Google Pay — Get ur btc fastest here
500.00-20,000.00 INR 500.00 INR $0.67 Iibso 4,603,248.97 INR Iibso Iibso
La eegay 6 saac kahor PhonePe — Third party Acepted
La eegay 23 daqiiqo kahor PhonePe — Get btc fastest here
La eegay 23 daqiiqo kahor IMPS Transfer — Get ur btc fastest here
lacag bixinnada oonleenka ah ma jiraan Qolyo Saddexaad wada hadal ma jiro
1,000.00-20,000.00 INR 1,000.00 INR $0.67 Iibso 4,603,248.97 INR Iibso Iibso
La eegay 11 saac kahor Kiishadda Oonleenka ah ee Paytm — Third Party Accepted
225.00-10,000.00 INR 225.00 INR $0.67 Iibso 4,603,248.97 INR Iibso Iibso
La eegay 6 saac kahor PhonePe — Third party accepted
looma Baahna Xaqiijin Paxful 6
La eegay 1 saac kahor Google Pay — Third pary payment accept
looma Baahna Xaqiijin lacag bixinnada oonleenka ah wada hadal ma jiro
500.00-46,231.00 INR 500.00 INR $0.64 Iibso 4,756,690.60 INR Iibso Iibso
500.00-30,000.00 INR 500.00 INR $0.67 Iibso 4,572,560.64 INR Iibso Iibso
La eegay 1 saac kahor PhonePe — 3rd Party accepted
La eegay 1 saac kahor IMPS Transfer — 3rd party accepted
500.00-46,465.00 INR 500.00 INR $0.64 Iibso 4,756,690.60 INR Iibso Iibso
Qaababka lacag bixinta ee ugu badan Hindiya
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah IMPS Transfer maanta.
Ku iibso Bitcoin IMPS Transfer
Kiishadda Oonleenka ah ee Paytm
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Kiishadda Oonleenka ah ee Paytm maanta.
Ku iibso Bitcoin Kiishadda Oonleenka ah ee Paytm
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Google Pay maanta.
Ku iibso Bitcoin Google Pay
Waxyaabaha Cayaaraha (Game Items)
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah Waxyaabaha Cayaaraha (Game Items) maanta.
Ku iibso Bitcoin Waxyaabaha Cayaaraha (Game Items)
Paxful waxay kaaga dhigaysaa mid fudud oo ammaan ah in aad gadato aadna haysato lacagaha elektoroonigga ah. Hoos ka hel yabooha ugu wanaagsan kuna iibso lacagaha elektoroonigga ah PhonePe maanta.
Ku iibso Bitcoin PhonePe
Ka caawi dadka kale ee jooga Hindiya inay helaan Bitcoin kadibna hel faa'iidooyin waawayn oo dhan 60% iib kasta oo aad samayso.Billoow inaad ku iibiso koontada baanka maxaliga ah hadda, arag tusmadeena bilaashka ah.. Paxful ayaa heesha 1000 qof oo iibsata Bitcoin kana socda Hindiya maalin kasta.
Ma taqaanaa dad badan oo doonaaya inay Bitcoin ku gataan gudaha Hindiya? Adoo kaashanaaya Dukaankaaga Bitcoin iyo Barnaamijka iskaashatada waxaad helaysaa 2% ganacsi kasta abidkaa adoo la wadaagaaya lifaaqa. Hadda biloow.